UKEKE PALMER UTROLA UDADE WAKHE ONGASEBENZIYO NGOKUBUZA IMALI YAKHE - HOLLYWOOD
Keke Palmer akanazintloni ngokudala esidlangalaleni idabi lobomi bokwenyani belungu lakhe losapho. NgoLwesibini, nge-15 kaSeptemba, umdlali weqonga / imvumi utyhile omnye wabantakwabo, u-Lawrencia Palmer, okwangoku akaphangeli kwaye wayiguqula kanye yaba yintlekisa.
Umntu othile eFlorida ndicela unike udade wethu umsebenzi, andinamdla kuye ndicela imali kuye, inkwenkwana eneminyaka engama-27 ubudala ngokukhalazayo ukhalaze kuTwitter. Uye wamazi lo dade ukhankanyiweyo kwenye i-tweet, ebhala, Lo ngudade'all. Uyafikeleleka kangangesiqingatha sexesha !!! Ngelixa uLawrencia wasabela kwisingeniso sikaKeke ngenani lokuqengqeleka emhlabeni ehleka ii-emojis.
UKeke Palmer wanyathela udadewabo ongaphangeliyo kuTwitter.
Xa omnye wabalandeli bakhe wabuza uKeke ukuba leliphi ishishini udadewabo uLawrencia alithandayo Khwaza Queens ngokuzithoba waphendula ngokuzithoba, ulwaphulo-mthetho nangona kunjalo uWendy's azakwenza. Kwaye ii-tweets zakhe zilibambe ngokufanelekileyo iliso lokutya okukhawulezileyo, nelinike impendulo kwinkxalabo kaKeke ngokwabelana ngekhonkco kwiphepha lewebhu lewebhu elinika iinkcukacha malunga neminye imisebenzi.
Kodwa kubonakala ngathi abanye abantu abawamkeli umsebenzi eWendy’s njengokuba uKeke esenza, bamnyanzela ukuba acacise, uY’all kubo ingxelo engena kwimisebenzi yokutya okukhawulezileyo nangona kunjalo ITS A JOB AINT IT LOL. Ikratshi linemithwalo emininzi apha phandle yaphuka ngaphandle kwesizathu kwaye iya kuba ngumphathi. Okanye kwanabo banelise umdali wezinto eziphathekayo, Yiza NYE NGOKU! #ndiyayifuna
iplanethi dolan ebomini bokwenyani
Ukwabelane ngomnye umyalezo malunga nokuqala ngasemva kwenye ukungenisa, ukubhala, Ngaphandle kokuba ngumphathi omangalisayo kukuqonda indlela elungileyo yokuba ngumsebenzi.
UKeke wabelane ngomyalezo malunga nokuqala ngasemva.
Edlule UStrahan, uSara noKeke Ukubambisana naye, osandula ukwazisa icwecwe lakhe elitsha iVirgo Tendency, Pt. 1, ukongeze ekwenzile isiqhulo malunga nodadewabo. Ndonwabile ngokupheleleyo ukuzalwa kanye kwikhaya eligcwele iziqhulo. Ndiyayiqonda into yokuba uburharha abuzukuxhaphaka lol, wathumela i-tweet.
Izigaba: Inetflix Iindaba Amazon-Prime
I-cobra kai yexesha lesithathu leendawo zokufota
Apho ubukele khona iwynonna earp yexesha lesi-4
i-flip okanye i-flop iphela
isibhakabhaka esikhulu sifotwe emontana